Imbongi yaseMgungundlovu ethubeni lendondo yama-Satma | News24
Imbongi yaseMgungundlovu ethubeni lendondo yama-Satma
IMBONGI yaseMgungundlovu uNompumelelo Khumalo izodlana imilala nezinye izimbongi emncintiswaneni wama South African Traditional Awards (Satma) akulo nyaka.
UKhumalo umenyezelwe njengomunye wabaqokiwe emkhakheni we“best poet” emcimbini wokumemezela abakhethiwe obuseMmabatho Convention Centre eNorth West ngempelasonto esiphuma kuyona.
UKhumalo uqokwe ngenkondlo yakhe esihloko sithi ‘Ngamampunge lawo’. Le miklomelo ezobe igubha iminyaka eyishumi yasungulwa, ibuyiselwa KwaZulu-Natal kulo nyaka njengoba izokwenzelwa e-University of Zululand ngoMfumfu (October).
Umsunguli walemiklomelo uDkt Dumisani Goba unxuse ubumbano nokusebenzisana phakathi kwalabo abaqokiwe ukuba bancintisane kulo nyaka.
“Inhloso yalemiklomelo ukuhlanganisa izinhlanga ezihlukene, ngakho kuzoba kubi ukungcofana kwabaculi. Leli zwe linezinhlanga ezihlukahlukene ezikhuluma izilimi ezihlukene, ngakho kubalulekile ukuthi sisebenzisane,” kusho uGoba.
Kulo nyaka kulindeleke ukuthi umcimbi ube sezingeni eliphezulu njengoba kuzohlanganiswa nokugujwa kweminyaka eyishumi lemi klomelo yasungulwa.
Ekhuluma ngokuqokwa kwakhe uKhumalo ongowokudabuka endaweni yaseNadi ngaPhezulu uthi uzizwa ejabule kakhulu ngoba kukhombisa ukuthi igalelo lakhe liyabonakala emphakathini.
Uthe: “Le nkondlo ngayibhala ngoba ngifuna ukuphikisa izinto eziningi ezishiwoyo, abantu abagcina sebezithatha njengeqiniso. Kule nkondlo ngiphikisa isisho esithi ‘Induku enhle igawulwa ezizweni’.
“Ngenxa yaleso sisho baningi abantu abangena emgibeni wokugawula ezizweni kodwa kugcine kuyinto engalunganga.”
UKhumalo owaqala ukuhaya izinkondlo ngo-2006 uphinde abe ngumbhali wezincwadi zesiZulu ezinye zazo ezifundwa ezikoleni. Abafisa ukumvotela bangathumela isms ethi Satma, Nompumelelo Khumalo, best poet ku 34066